ထွက်ပြီးသားသီချင်းတွေကို ဇာတ်လမ်းလိုပြန်ရိုက်ခဲ့တဲ့အပေါ် ရူးပြီးလုပ်တယ်ဆိုပြီး ရိသဲ့သဲ့အပြောတွေကြောင့် ခံစားရတယ်ဆိုတဲ့ မေ - Cele Connections
“ထွက်ပြီးသားသီချင်း‌တွေကို ဇာတ်လမ်းလိုတွေ ရူးပြီး ပြန်ရိုက်နေတာမဟုတ်ပါဘူး. . . 😥ကိုယ့်ပရိသတ်အစစ်တွေအတွက် အမှတ်တရ Album လေးလုပ်ချင်လို့။ 24ရက်နေ့ထွက်မယ့် “The Journey” သီချင်းကလည်းအရှေ့ကသီချင်းတွေနဲ့ သေသေချာချာ Concept တွေချိတ်ပြီးရိုက်ထားလို့ပါ အားလုံးသေချာစဉ်းစားစီစဉ်ပြီးမှ ရိုက်ခဲ့တာပါ။ဝမ်းနည်းတာတစ်ခုက Covid ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ အခြားကိစ္စတွေအတွက် ငွေကြေးအရရော Album လေးဆက်မလုပ်ဖြစ်တော့တာပါ။ ဒါပေမယ့် အခုလို Facebook ကနေပဲတင်ရတော့လည်း ပရိသတ်တွေအားလုံးနဲ့ Comment တွေအပြန်အလှန်ပေး၊စကားတွေပြောရတာလည်း ပျော်မိပါတယ်။ ❤️”
“နောက်ထပ်ဝမ်းနည်းရတာက Facebook Page တွေက ပုံစံအသစ်တွေ၊ပုံစံအဟောင်းတွေ ဖြစ်သွားတဲ့ကြားမှာ Engagement တွေကျနေတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတာပါ။ တင်သမျှ ပို့စ်တွေကို လူတွေသိပ်မမြင်ရဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဝမ်းနည်းရပါတယ်။ ဒီ “Journey ” အတွက် ကျွန်မအများကြီးစိတ်ပင်ပန်းရပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၉လ လောက်ကတည်းက လုပ်နေတာပါ။ အချစ်သီချင်းတစ်ပုဒ်ချိုချိုလေး ဖန်တီးလိုက်ရင် ပရိသတ်ကြိုက်ကြမှာသိပါတယ်။ ဘာလို့ဒီလိုတွေ ခက်ခက်ခဲခဲ စဉ်းစားပြီးလုပ်ခဲ့လဲ? ကျွန်မဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ဘဝရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ချို့ကို ကျွန်မပရိသတ်အစစ်တွေကို ဇာတ်လမ်း(သီချင်း)ထဲကနေ ပြောပြချင်တာပါ။ တချို့ ရိသလို အပြောတွေ အတွက် ကျွန်မ😣😞😢 ခံစားရပါ၏။ မပျက်သောမေတ္တာများဖြင့် မေ” ဆိုပြီး သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ ရင်ဖွင့်ပြောပြလာပါတယ်။
မေကတော့ ထွက်ပြီးသားသီချင်းတွေကို ဇာတ်လမ်းလိုပြန်ရိုက်ခဲ့တဲ့အပေါ် ရူးပြီးလုပ်တယ်ဆိုပြီး ရိသဲ့သဲ့အပြောတွေကို ခံစားရကြောင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ထှကျပွီးသားသီခငျြးတှကေို ဇာတျလမျးလိုပွနျရိုကျခဲ့တဲ့အပျေါ ရူးပွီးလုပျတယျဆိုပွီး ရိသဲ့သဲ့အပွောတှကွေောငျ့ ခံစားရတယျဆိုတဲ့ မေ
မကေတော့ ထှကျပွီးသားသီခငျြးတှကေို ဇာတျလမျးလိုပွနျရိုကျခဲ့တဲ့အပျေါ ရူးပွီးလုပျတယျဆိုပွီး ရိသဲ့သဲ့အပွောတှကေို ခံစားရကွောငျး ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပွောလာတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ Cele Connections ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။